Tsy ampy ny fizarana - Maninona ianao no mila paikady fanamafisana atiny | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 17, 2018 Alarobia, Oktobra 17, 2018 Sarah Williams
Nisy fotoana raha hanamboatra azy ianao dia ho avy izy ireo. Saingy izany rehetra izany talohan'ny nahatonga ny internet ho tototry ny atiny sy tabataba be loatra. Raha nahatsiaro ho sorena ianao fa tsy lasa lavitra toa ny taloha intsony ny atiny dia tsy anao izany. Niova fotsiny ny raharaha.
Androany, raha mikarakara tsara ny mpihaino anao sy ny orinasanao ianao dia tsy maintsy manamboatra paikady hanosehana ny atiny mankany amin'ireo olona mila azy indrindra - amin'ny alàlan'ny paikady fanamafisana ny atiny.
Fa maninona no be resaka momba ny atiny?
Fantatry ny rehetra sy ny alikany ny maha-zava-dehibe ny soratra sy votoaty hita maso dia amin'ny marketing. Io no fiara fototra izay mampita ny hafatrao amin'ny mpihaino anao, ny teny, sary ary horonan-tsary no mamorona fihetseham-po ary mampihetsika ny olona hanao zavatra. Ary miaraka amin'ny Action no misy ny Transformation, ny fahasambarana avo indrindra amin'ny orinasa rehetra.
Izay rehetra apetrakao any, na inona na inona fantsona [lahatsoratra bilaogy, tantara Instagram, taratasim-baovao, horonan-tsary, sns.] Eo imason'ny mpihaino anao dia manampy anao hitazona azy ireo ho liana sy hifanaraka amin'ny marikao. Izy io koa dia manampy anao hitodika bebe kokoa amin'ny orinasanao sy tsy tapaka manitatra ny mpihaino anao amin'ny maha-bilaogera anao.
Noho izany, tsara ny famoronana atiny, ny famoahana azy amin'ny sehatra samihafa dia tsara ihany koa, saingy mila ampitomboinao ihany koa izany raha tianao hahatratra ny isan'ny olona betsaka indrindra izany.
Ireto misy tetika matanjaka vitsivitsy hananganana ny paikadinao fanamafisana ny atiny:
Doka voaloa - Eritrereto ireo doka toy ireo elatra tsy hita maso ireo izay mitondra ny atiny hatramin'ny halavany lehibe kokoa. Ny ankamaroan'ny sehatra, amin'izao andro izao, dia nanjary mandoa vola hilalao rafitra, indrindra ny Facebook. Tsy misy tsy mety eto, orinasa izy ireo, toa anao. Raha afaka mametraka $ 1 ianao ary mahazo $ 2 indray, tsy te hilalao ve ianao? Ny fandoavana doka dia tsy ho an'ny tanjona tokana fotsiny manosika ny atiny hivoaka eo imason'ny mpihaino misy anao. Tsara ihany koa ny fidirana amin'ny mpihaino vaovao sy ny fanitarana ny tratranao, mihoatra ny fitaoman-tenanao manokana.
Lazao ny marika sy ny influencer hafa - Ny tanjona eto dia ny fananganana fifandraisana sy finiavana tsara amin'ny namana ao amin'ny akany amin'ny alàlan'ny fizarana ny sasany amin'ny atiny na ny fanondroana azy ireo isaky ny azo atao izany. Ity dia hametraka anao amin'ny radars ary hahatonga azy ireo hamaly kokoa rehefa tonga ny fotoana mety.
Angataho ireo influencer hihira - Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra hidirana amin'ny mpihaino influencer dia ny fangatahana azy ireo ny hevitr'izy ireo amin'ny lohahevitra sasany. Raha tokony hiezaka ny hamoaka ny lahatsoratry ny vahiny ianao eo amin'ny sehatra misy azy ireo na handresy lahatra azy ireo hizara ny atiny amin'ny mpihaino azy aza dia azonao atao ny mandefa mailaka azy ireo mangataka ny hevitr'izy ireo momba ny lohahevitra iray ao amin'ny akany. Ity dia handany fotoana kely amin'ny fiafaran'izy ireo ary mety hiteraka fizarana indray ny atiny manontolo amin'ny mpihaino azy. Ary hanampy anao hanangana fifandraisana ary ny sitrapo tsara amin'ny fomba mety. Ary koa, miezaha hampiasa ny fomba fisainanao mitsikera fotsiny mba hahazoana zava-misy fa tsy rahona noho ny fijerin'ny fihetseham-po ny vokatrao.
Ampiasao ny tranobe teknika! - Raha fintinina, ity dia fomba fananganana ambonin'ireo atiny sarobidy efa misy. Raha ny tena izy, manao fikarohana goavana amin'ny lohahevitra manokana ianao, manangona angon-drakitra betsaka araka izay azonao atao ary avy eo manampy ny fihoaranao momba ilay lohahevitra ary mizara ny fomba fijerinao tsy manam-paharoa amin'ny resaka iray manontolo. Rehefa vita ianao dia alefaso amin'ny mpamorona atiny rehetra voalaza ao amin'ny asanao ny atiny ary angataho ny valin-tenin'izy ireo sy ny fizarana amin'ireo mpihaino azy manokana.
Avereno jerena ny atiny - Mipetraka eo amin'ny tranokalanao ve ireo lahatsoratra bilaogy sarobidy? Omeo fanombohana vaovao izy ireo amin'ny alàlan'ny fananganana torolàlana maharitra mandrakizay amin'ny alàlan'ny atiny tsara indrindra. Ampiasao avy eo ho toy ny andriamby fitarika ho an'ny saina bebe kokoa sy fanentanana amin'ny marika. Io dia hahafahanao mampiasa indray ny atiny misy anao izay nandany fotoana sy enti-miasa hamoronana sy hidirana amin'ny mpihaino vaovao.
Mamadika ireo lahatsoratra bilaogy ho lahatsoratra media sosialy manaikitra sy teny azo lazaina
Mamorona horonantsary fohy mampiasa fitaovana toa Lumen5 or Inshot hizara toro-hevitra haingana
Raiso ny audio avy amin'ny atiny video anao ary avadiho ho podcast
Farany, mila stratejika ianao amin'ny famoronana sy fampiasana ny atiny. Midika izany fa tsy maintsy mieritreritra stratejika ianao ary manosika ny atiny tsara indrindra manoloana ireo izay tena mila izany. Ny lakile eto dia Relevance.
Tsy misy zavatra mampalahelo kokoa noho ny famoronana atiny midadasika be vidy ary avy eo manaparitaka izany amin'ireo mpanatrika tsy mety. Avelao ity fomba ity hitarika ny tetikadinao amin'ny famoronana atiny sy fanamafisana ny votoatiny.
Alao antoka fa azonao tsara ny olan'ny mpihaino anao ary mazava aminao koa ny vahaolana. Avy eo, tandremo ny alehan'ny sain'ny mpihaino kendrenao. Avy eo atsofohy amin'ireo sehatra ireo amin'ny alàlan'ny atiny mifandraika izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa sy ny irakao koa.
Ahoana ny fomba famoronana sy fampiroboroboanao ny atiny ankehitriny? Ary iza amin'ireo teknikan'ny fanamafisana ireo no tadiavinao voalohany? Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ireo hevitra etsy ambany!
Tags: marikafiaraha-miasafanamafisana ny atinyrepurpose atinyInfluencersdokam-barotra karamamandoa vola hilalaorepurposerepurpose atinyteknikan'ny skyscraper
Sarah Williams dia mpandraharaha monina any Berlin, mivarotra manam-pahaizana manokana amin'ny fifandraisana an-tserasera. Zahao ny fanombohana nomerika ankafiziny - Magazine Wingman - magazine amin'ny fomba fiaina an-tserasera ho an'ny lehilahy.
Ny fanovana nomerika dia olan'ny fitarihana fa tsy olana ara-teknolojia